Momo8,Momo9,Mono11 Tablet တွေ ကို firmware ပြန်တင်ကြမယ် | IT Sharing Network
momo9 အတွက် firmware link လိုချင်လို.ပါ ရှာမတတ်လို.ပါ
အဲဆို အကို ကျတော့tablet momo113bird က logo လေးပဲေါ်ပြီး တတ်ော့လာတယ် ပြီးတော့ပြန်ပိတ်သွားတယ်
အကို ကျတော့ table က driver ကိုမသိတာကူညီပါဦး
Charming Phyo said...
how to update firmware for gopad tablets I 700 . Can I get it ?
MOMO 11 tablet က factory reset key သိချင်လို့ပါ.ကူညီပါဦး
momo 9star Android 4.0.3 firmware ရမလားခင်ဗျာ
ဟုတ်တယ် အစ်ကို ကျွန်တော့် Tablet လေးကကျတော့ MoMo9-3S တဲ့ အဲ့ဒါကျတော့ ဘယ်မှာဒေါင်းလို့ရမလည်း အစ်ကို ... ဒါမှမဟုတ် ဘယ်Firmware နဲ့များတူမလည်း.... ကျေးဇူးပါနော်...
မရ ဘူးဗျို. MoMO9 -A13 firmware လည်း တွေ.ဘူး :(
http://www.ployer.cn/ မှသွားဆွဲလိုက်ပါ အားရင်(Myanmar Muse Mobile)မှာတင်ပေးမယ်။...။
ဒီ နေရောင် said...
အကိုရေ momo 11 ပါဝါဖွင့် လို မရ တော့ လို့ ပါ ...format reset ချလိုက်မိတာပါ ...ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါ ..